बुटवलमा युवती बेच्ने पसल ! १५ बर्षिया बालिका समेत बेचबिखनमा « Khasokhas
बुटवलमा युवती बेच्ने पसल ! १५ बर्षिया बालिका समेत बेचबिखनमा
लागु औषधमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेर अनुसन्धानमा लागेको प्रहरी, रुपन्देहीमा युवतीहरुको पसल राखेर होटल होटलमा सप्लाई गरिने घटना फेला परेपछि झस्केको छ । बुटवलमा रहेको एक सानो होटलबाट ठुला ठुला होटलहरुमा समेत युवती सप्लाई हुने गरेको तथ्य प्रहरीले हात पारेको छ ।
प्रहरीका अनुसार राप्ती मेनु होटलमा किशोरी र युवतीहरु जम्मा गर्ने र बुटवलमा बिभिन्न होटलहरुमा यौनधन्दाका लागि पठाउने गरिएको थियो । किशोरीको बयानमा पनि हाफुलाई गाडीमा राखेर अग्ला घर भएको एसी चल्ने होटलमा पठाईएको ब्यहोरा आएको प्रहरीले जनाएको छ । किशोरीको बयानका आधारमा प्रहरीले होटल संचालक दम्पत्ती टेकबहादुर कुंवर र मिना कुमारी कुंवरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रहरी यौनधन्दा नियन्त्रण गर्न र समाजमा बिकृतिलाई न्युनिकरण गर्न सक्रियतापुर्वक लागेको रुपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक हृदय थापा बताउंछन् ।
प्रहरीको सक्रीयतालेमात्र यौन धन्दा नियन्त्रण नहुने बताउंदै एसपि थापाले समाजमा रहेको नागरिकहरुको सहकार्य र सक्रियतामा प्रहरीले यस्ता धन्दामा नियन्त्रण गर्न सक्ने बताउंछन् । कुंवर दम्पत्तीले युवतीहरुलाई एक पटक सम्पर्क गरेको १ हजार ५ सय र रातभरी बसेको ६ हजार सम्म लिने गरेको एसपी थापाले बताए । उद्धार गरिएकी किशोरीलाई भने एक पटक ३हजार ५ सय र एक पटक एक हजार ५ सय मात्र दिएको किशोरीले बताईन् ।
प्रहरी उपरिक्षक थापाले किशोरीको बयानका आधारमा यौनधन्दाको बिषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरिने बताएका छन् ।
१५ हजारका लागि साथीको हत्या :
उता रुपन्देही प्रहरीले मात्र १५ हजार रकमका लागि आफ्नै साथीको हत्या गर्ने समुहलाई समेत पक्राउ गरेको छ । १५ हजार गोजीमा हालेर मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा अपशब्द बोलेको निहुमा कपिलवस्तुका चिरन्जीबी आचार्यको हत्या भएको प्रहरीले बताएको छ । संगै होटलमा मदिरा सेवन गरेका राजु बिक र रमेश बिकले १५ हजार लुटनकै लागि आचार्यको ढुंगाले टाउकोमा हानेर हत्या गरेको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
हत्या पछि स्थानीय गोपाल खनाल र बसन्त खत्रीको संरक्षणमा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा प्रहरीले खनाल र खत्री सहित बिक द्धयलाई पक्राउ गरेको छ । जेठ ६ गते रुपन्देहीकोे सैनामैना १० सितलापुरमा आचार्यको शव फेला परेको थियो । गरिबी र मदिरा सेवन हत्याको प्रमुख कारण भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका नायब प्रहरी उपरिक्षक डिलबहादुर मल्ल बताउंछन् ।